Garsoorahaan Waa Ninka labaad ee Cabsida ugu badan ku haya Xulka dalka England Sabab? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Garsoorahaan Waa Ninka labaad ee Cabsida ugu badan ku haya Xulka dalka England Sabab?
Garsoorahaan Waa Ninka labaad ee Cabsida ugu badan ku haya Xulka dalka England Sabab?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 3-06-16 9:18 PM Waxaa dhawaan bilaaban doona koobka Qaramada qaarada yurub 2016 kaas oo Xiligaan lagu qabanayo dalka France koobkaas oo ah mid ay ka qayb gelayaan 24 dal.
Xulka qaranka England oo ka mid ah Wadamada ka qayb gelaya koobka yurub ayaa waxaa ay Cabsi Saa id ah ka muujinayaan Garsooraha u dhashay dalka Turkiga ee Cuneyt Cakir kaas oo aan Record Wanaagsan ku lahayn marka uu qabto Cayaar ay dheelayaan Xidigaha dalka England.
Cuneyt Cakir waa Ninka Labaad ee England ugu Cabsida badantahay Maraka laga reebo Gareth Bale kaas oo u dheelaya dalka Wales oo ay isku Gruub yihiin Xulka dalkaas.
Garsoorahaan dalka Turkiga oo ka mid ah Garsoorayaasha dhex dhexaadin doona koobka yurub ayaa waxa uu Roosayaal horay u siiyey Cayaartoy England oo u dheelayey kooxaha dalkaas iyo qarankaba.
Ninkaan ayaa Roose siiyey Cayaaryaahnkii hore ee Liverpool Steven Gerrard.kulan ka tirsan isreeb reebka koobka aduunka oo dhex maray Wadamada Ukraine iyo England.
Sidoo kale Waxa uu Garoonka ka Cayriyey daafaca Naadiga Chelsea Gary Cahill isla Sanadkaas ayuuna Roosaha siiyey Cahill waxaa kale uu Roose siiyey Kulan ka tirsanaa Semi Finalka Champions League oo dhex maray Chelsea iyo Barcelona daafaca kabtanka ah ee John Terry.
Garasoorayaasha koobka yurub 2016 Waxaa ka mid ah Garsoore Willie Collum oo ka socda dalka Scotlland kaas oo ah kan ugu Roosaha badan waxa uuna bixiyey 25 Roose 92 kulan taas oo ka dhigan in 3 Cayaarba uu bixiyey 1 Roose.
Garsoorayaasha ugu Waayo aragsan koobka yurub waxa ay kala yihiin Viktor Kassai iyo Damir Skomina kuwaas oo horay u soo dhex dhexaadiyey midkiiba 118 kulan oo Caalami ah.